China ERV Heat Recovery Ventilator miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy Purifier | AIR-ERV
Ventilator fanarenana hafanana ERV miaraka amin'ny Purifier
Ny ERV Heat Recovery Ventilator miaraka amin'ny Purifier dia tsy vitan'ny mpamatsy hafanana miorina tsara mba hamerenana ny hafanana sy hitsitsiana herinaratra, fa hanampy koa ny sivana voalohany, sivana karbaona mavitrika ary sivana HEPA hanivana tsara ny vovoka, bakteria ary zavatra manimba hafa eny amin'ny rivotra, PM2. Ny fahombiazan'ny fanadiovana 5 dia hatramin'ny 99,5%.
Natao ho an'ny villa, sekoly, efitrano fisotroana kafe, efitrano fivoriana, birao, hotely, laboratoara, KTV, klioban'ny fanatanjahan-tena, sinema, lakaly, efitrano fifohana sigara ary toerana hafa no mila rivotra sy fanadiovana.
1.Schable exchanger hafanana alimina sy exchanger hafanana taratasy azo isafidianana.
2.Standard switch na mpitsikilo manan-tsaina safidy.
3.Motor DC marika na motera AC ho an'ny safidy.
4.Telo sivana ao anatiny.
Misy sivana voalohany + sivana karbaona mavitrika + sivana HEPA hisorohana ny rivotra maloto, ny sivana HEPA dia afaka mampihena ny PM2.5 amin'ny fomba mahomby ary hahazoana antoka fa madio sy madio ny rivotra.
1.Energy Saving: vondrona famerenana angovo mikoriana, fantsom-panafody mahitsizoro, nanatsara ny fahombiazan'ny famerenana angovo, nampihena ny fanoherana ny onja.
2.Fanivanana haingam-pandeha: ny fidiran'ny rivotra dia manana fitaovana sivana voalohany sy fitaovana sivana HEPA avo lenta, izay afaka manivana ny vovoka, bakteria ary zavatra manimba hafa eny amin'ny rivotra, ny fahombiazan'ny fanadiovana PM2.5 dia hatramin'ny 99.5%.
3.Fanaparitahana fampiharana: Mikoriana ny rivotra hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 1.000 m³ / ora, mety ho an'ny villa, sekoly, efitrano fisotroana kafe, efitrano fivoriana, birao, hotely, laboratoara, KTV, klioban'ny fanatanjahan-tena, sinema, lakaly, efitrano fifohana sigara ary toerana hafa. fanadiovana.
4.Fitenenana ambany: ny famolavolana firafitra voatsonga, ny fitaovana ampiasaina amin'ny feo ary ny impeller tsy metaly, dia nanome antoka ny vokan'ny feo tsara.
5.Main Function: manome rivotra sy rivotra mandany miaraka + ny fanarenana hafanana hamonjy angovo + sivana HEPA ho an'ny fanadiovana.
Modely: azo namboarina.
K andiany misy maotera DC, mpanova hafanana taratasy ary sivana telo sosona.
H andiany miaraka amin'ny motera DC, exchanger hafanana aluminium ary sivana telo sosona.
K andiany misy maotera AC, mpanova hafanana taratasy ary sivana telo sosona.
H andian-tsarimihetsika miaraka amina motera AC, exchanger hafanana aluminium ary sivana telo sosona.
Teo aloha: Ventilator fanarenana hafanana sy angovo mahazatra
Manaraka: ERD Cross & Counter Heat Exchanger
Ventilator mitaingina rindrina tsy misy fantsona
Double Way Ventilator - famatsiana sy faharerahana ...
One Way Ventilator - manome rivotra na ...